Markab ku xirtay xeeb ay maamusho Al-Shabaab | KEYDMEDIA ENGLISH
Markab ku xirtay xeeb ay maamusho Al-Shabaab
Markabka ayaa tan iyo 2010 ku xirnaa meel ku taalla Istanbul ilaa IHH ay go'aansatay inay ka iibiso qoyska Tümsek. Erdal Tümsek, oo ah madaxa qoyska, ayaa soo saaray bayaan ku saabsan iibsashada markabka, maxaase ka danbeeyay?
MUQDISHO, Soomaaliya - Sida laga soo xigtay Nordic Monitor, markabka Anatolian, oo laga leeyahay dalka Turkiga, ayaa wajahaya baaritaan ay wadaan, Guddiga khubarada Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ee la socda hubka sharci darrada ah.
Markabkaan oo ay maamusho, shirkadda Mavi Deniz Limited, oo xarunteedu tahay Istanbul, ayaa la sheegay inuu qiyaastii 24 saacadood, ku sugnaa, goob wax ka yar 1000, mitir, u jirta xeeb ku taalla Soomaaliya, gaar ahaan aagga ay maamusho Al-Shabaab.
Sida uu muujinayo nidaamka lagula socda markabka ee AIS, Anatolian, ayaa bishii Ogosto 2021-kii, yimid Soomaaliya, xilli Turkiga uu sidoo kale wajahayo eedeymo ah inuu diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ka iibiyay Ibiy Axmed, oo dagaal ka wada Itoobiya.
Baarayaasha Qaramada Midoobay, ayaa degaanka uu markabku, tagay, ku sheegay, tuulo xeebeed lagu magacaaabo Masjidka Cali Gaduud, oo hoos tagta degaanka Cadale ee Gobolka Shabeellada Dhexe, waxayna muujiyeen shaki la xariiray inuu Al-Shabaab, hub u waday.
Shirkadda markabka leh, ayaa sheegtay inay dhibanayaal u noqdeen weerar loo adeegsaday qorayga RPG iyo hubka fudud, 13-kii Ogosto 2021-kii, xilli ay marayeen biyaha Soomaaliya, hayeeshee, Baarayaasha Qaramada Midoobay, ayaan ku qancin sheekadaas.
Shirkadda markabka iska leh, kama aysan jawaabin, codsi la xariiray in ay faahfaahin ka bixiyaan weerarka ay ku wajheen xeebaha Soomaaliya, xilligi ay warbixinta markabkaasi ku sabsan bishii October 6, 2021, loo gudbinayay Golaha Ammaanka.
Sida ku cad xogta, Nordic Monitor, markabka waxaa iska leh qoyska, ganacsade lagu magacaabo Erdal Tümsek, waxaana markii hore lahayd shirkad hore loola xariiray in ay taageero siisay Al-Qaciddada Iraq iyo Syria, waxayna iska iibisay bishii August 2018.
La-yaabka ayaa ah, in qoyska markabka lahaa, ee Erdal Tümsek, iska iibiyeen, isaga oo ku sugan xeebta Muqdisho, bishii Noofambar 2021, kuna wareejiyeen, shirkad kale oo laga leeyahay dalka Turkiga oo lagu magacaabo 2E Denizcilik San.
Shirkadda ayaa si guud u musalaftay, Sebtember 15, 2021, sida ku cad go'aanka maxkamadda ganacsiga ee Istanbul, taas oo la macno ah in markabka oo u shiraacday Soomaaliya in ay shirkadda la soo deristay culays dhaqaale oo sababay in la iibiyo.